दुई महिना पहिले दुबईमा एक नेपालीको मृत्यु भयो । मृत्यु प्रमाणपत्रमा उनको मृत्युको कारण 'प्राकृतिक' भनेर लेखियो । उनको मृत्युको वास्तविक कारण थियो- 'ब्रेन हेम्रेज' । उनी बाथरूम गएको बेला बाथरूम भित्रै ढले । बाथरूमबाट किन बाहिर आएनन् भनेर हेर्न जाँदा अर्धचेत अवस्थामा भेटिए ।
के एनआरएनएले उद्देश्यमा उल्लेख गरे जस्तो लाखौँ प्रवासी नेपालीहरूलाई गोलबद्ध गर्न सकेको छ? सामूहिक लगानीको वातावरण बनाउने, उनीहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न अहिलेसम्म के के प्रयास गरेको छ? गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, क्षमता र अनुभवलाई नेपालको हितमा कहाँ कहाँ प्रयोग गर्न सक्यो? संस्थालाई सिन्डिकेटमै राखिरहने कि उद्देश्य प्राप्तिमा ध्यान दिने?
यूएईमा कार्यरत प्राय सबै नेपालीलाई थाहा छ, यो देशमा सार्वजनिक रूपमा मदिरा सेवन गर्न पाइँदैन । दुबई, अबुधाबीलगायतका कतिपय राज्यहरूमा त मदिरा किन्न र पिउन पनि लासेन्स लिनु पर्छ । तर पनि नेपालीले नेपालदेखि लागेको बानी छोडेका छैनन् ।
सामान्यता खाडीमा ‘३ डी’ को काममा नेपालीहरु जाने बुझाई हो । तर, अवस्था फेरिएको छ । सपना लोकको रुपमा हेरिने यूरोप र अमेरिका छाडेर पनि कति नेपालीले यूएर्इको ‘३ एस’ काम रोजेका छन् । तिनै मध्येका हुन्, प्रदीप पौडेल ।
मेघराज सापकोटाका लेखहरु :
अव श्रम सम्झौता खाडी मुलुकसँग
नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारी (एमओआई) बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कोशेढुङा हो । कुल ग्राहास्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रेमिटेन्सले धानेको हाम्रो मुलुकमा कुल बैदेशिक रोजगारी कै ३० प्रतिशत अर्थात ४ लाखको हाराहारीमा नेपाली मलेसियामा रहेका छन् ।
जीवनभर पलायनबादी भएर देश छोड्नेहरुलाई अमेरिका वा युरोपको ग्रिनकार्ड अनिबार्य चाहिन्छ । नेपालमा भएको बाबुबाजेको पैत्रिक सम्पत्ति बेचेर हुण्डी मार्फत अमेरिका वा युरोपमा लगेर घर किन्ने सोच भएकाले युएईलगायतका खाडी मुलुकहरुमा ग्रिनकार्ड पाइन्न भनेर खिसिट्यूरी गर्नु पनि सामान्य नै हो ।
सार्वजनिक यातायातमा दुबईको उदाहरण
नेपालीहरुले पहिलो पटक मेट्रो ट्रेन चढेको दुबईमा नै हो । पहिलो पटक वाईफाई युक्त बस चढेको पनि दुबईमा नै हो । मेट्रो ट्रेन र मेट्रो बसमा यात्रा गर्दा नल कार्ड प्रयोग गर्न सिकेको पनि दुबई आएरै हो । दुबई आउनु अघि कसैले पनि उनीहरुलाई न त मेट्रो बस कसरी चढ्ने सिकायो न त मेट्रो ट्रेनमा भाडा कसरी तिर्ने भनेर तालिम दियो । तै पनि नेपालीहरु यी कुरामा पोख्त छन् ।